ကာတွန်းတွေကိုလူတွေဘာကြောင့်လိင်ဆွဲဆောင်တာလဲ။ နီကိုလတ် Tinbergen ၏ "စူပါပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှု" ၏အယူအဆကိုလူသားများသည်အဘယ်ကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအမှန်တရားပုံစံသို့ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရသည်ကိုရှင်းပြသည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကာတွန်းတွေကိုလူတွေဘာကြောင့်လိင်ဆွဲဆောင်တာလဲ။ နီကိုလတ်တန်ဘာဘာ၏“ စူပါပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှု” ၏အယူအဆသည်လူတို့အားအဘယ်ကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအဖြစ်မှန်ပုံစံသို့ဆွဲဆောင်သည်ကိုရှင်းပြသည်။
မူရင်းဆောင်းပါး Link ကို
14 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Pornhub ၏နှစ်စဉ်ကိန်းဂဏန်းများအရ“ hentai” နှင့်“ ကာတွန်း” တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်သဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အတုအရာ ၀ တ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်၏ပင်ကိုစရိုက်လက္ခဏာများထက်အလိုလိုတုန့်ပြန်မှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Supernormal လှုံ့ဆော်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်, ဒါပေမယ့်လည်းအနုပညာ, junk အစားအစာ, နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကိုရှင်းပြမသာ။
နှစ်စဉ်ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Pornhub ကိုထုတ်ဝေသည် နှစ်စဉ်စာရင်းဇယား အွန်လိုင်း porn အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသေးစိတ်။ 2018 ထံမှတချို့က takeaways? လွှဲပြောင်းအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကတုန်လှုပ်စေသော 4,403 petabytes, United States ကို (ကကြီးမား margin က) အကြီးဆုံး porn စားသုံးသူဖြစ်ပြီး, မုန်တိုင်းထန်ဒံယေလအများဆုံး (ပဲလက်ရှိဖြစ်ရပ်များအပေါ်ကိုတက်နိန်) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေသည်။
အဆိုပါအမျိုးအစားနှင့်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများအကြားအလတ်စားဒါပမေဲ့အံ့သွနိုင်ငံခြားထင်ရစေခြင်းငှါစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါသည်: hentai ။
hentai အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူးဆိုရင်သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်ကနေဒီ loanword ဒီထက်များကဲ့သို့အခြားဂျပန်စကားသည်ထက်ကောင်းစွာ-လူသိများသည် ဆူရှီ, ဆာမူရိုင်း, ဆူနာမီနှင့် မုန်တိုင်းသို့သော်လည်း, သူတို့အဆိုထက် ပို. Google ကရလဒ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ယင်း၏မိခင်ဘာသာစကားမှာစကားလုံးတစ်ကောက်သောသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေဆိုလိုသညျ။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပစိဖိတ်ခုန်ထွက်ပြီးနောက်ကဂျပန်စတိုင်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပြနဲ့ animations တွေကိုကိုယ်စားပြုသို့ရောက်ကြ၏။
လူအများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသော်လည်း hentai သည် Pornhub ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၏ဒုတိယအများဆုံးရှာဖွေမှုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့ကဤလမ်းကြောင်းသစ်ကို“ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဂျပန်၊ amiright? ဒါပေမဲ့သူတို့ကမှားကြတယ်။
ဂျပန်ဆက်ဆက်ရုပ်ပြ erotica တစ်သမိုင်းရှိပါတယ် - shungaHokusai မှ“ တံငါသည်၏ဇနီး၏အိပ်မက်” ကဲ့သို့သောအကျော်ကြားဆုံးဥပမာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော်စိတ်ကူးစိတ်သန်းထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ပန်းချီကားများရေးဆွဲရန်တစ်ခုတည်းသောယဉ်ကျေးမှုသည်ခဲယဉ်းသည်။
အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစွဲမြဲမြဲကာတွန်းအမြောက်အများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာတွင် Marge Simpson ၏အလှည့်ဖြစ်သည် Playboy ကစားဖော်, 1950s pin ကို-up, မိန်းကလေးများနှင့် တီယူအာနာသမ္မာကျမ်းစာ, pulpy porn မဟာစီးပွားပျက်ကပ်ကာလအတွင်းရေပန်းစား comics ။
မဟုတ်သလိုဒီလမ်းကြောင်းသစ်ခေတ်သစ်ခေတ်မှကန့်သတ်သည်။ အလယ်ခေတ်အနုပညာရှင်တွေ အများအပြား ribald ပန်းချီကားများကိုထုတ်လုပ်သည်မဂိုအင်ပါယာပုံဥပမာ edition မှာပြန်တမ်း Kamasutra, နှင့်အာရုံငါးပါး frescas အဆိုပါအကြားတူးဖော်ခဲ့ကြ ပွန်ပေ၏ပြာကို။ အနုပညာသမိုင်း, ကပုံရသည်၎င်း၏မွေ့ရာအောက်တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်အတော်လေးဇာတိပကတိ cache ကိုရှိပါတယ်။
ပုံဥပမာလူ့ပုံစံဆွဲဆောင်မှုရှင်းလင်းစွာအချို့ newfangled နှစ်တစ်ထောင် kink ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ psyche သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းကိုတိုးချဲ့။ ကျနော်တို့ကလူ hentai ဖို့ဆွဲဆောင်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ကိုကြည့်မတိုင်မီဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ Songbird ဆွေးနွေးရန်အနည်းငယ်လမ်းလွှဲယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Songbird နှင့် supernormal လှုံ့ဆော်မှု
gravure ရုပ်တုမဂ္ဂဇင်းအတူရုပ်ပြ cheesecake featuring တစ်ဦးကဂျပန်အဆင်ပြေစတိုးဆိုင်မဂ္ဂဇင်းထိန်သိမ်း။ ဓာတ်ပုံအကြွေး: Flickr ပေါ်မှာဒန်နီ Choo
Nikolaas Tinbergenကြာမြင့်စွာနှင့်ကျော်ကြားခဲ့သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည်တိရစ္ဆာန်အသိစိတ်နှင့်အပြုအမူများ၊ သူအားချီးမြှင့်ခြင်းအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအားကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပုံကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည် ဇီဝကမ္မဗေဒ / ဆေးပညာအတွက် 1973 နိုဘယ်ဆု ကားလ်ဗွန် Frisch နှင့် Konrad Lorenz အတူ။ မိမိအများစွာကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုများထဲတွင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ထူးခြားသောမွေးရာပါတုံ့ပြန်မှုဆီသို့တစ်ပင်, kill switch ကိုအတူတိရိစ္ဆာန်များ imbued မစေခြင်းငှါသီအိုရီဖြစ်ခဲ့သည်။
သူ၏သီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့သူကြီးမားသောအပြာပြည့်နှက်များနှင့်အနက်ရောင်အပြောက်အစက်နှင့်ဖုံးလွှမ်းကြ၏အတုကြက်ဥကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သူသည်ထူးခြားသောမွေးရာပါညို, ဖြူဖပ်ဖြူရောအပြာကြက်ဥပေါ်ထိုင်ဖို့မောင်းနှင် Songbird ၏အသိုက်တွင်ဤကြက်ဥတင်လိုက်တယ်။ ငှက်တို့သည်အလျင်အမြန်အတုကြက်ဥသူတို့ကိုပယ်လျှောခြင်းမရှိဘဲပေါ်တွင်လဲလျောင်းရန်အဘို့အလွန်းကြီးတွေဖြစ်ခြင်းရှိနေသော်လည်းသစ်ကိုဆိုက်ရောက်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့သူတို့ရဲ့သဘာဝအကိုယ်စားပေါ်စွန့်ပစ်။
သူက၎င်းကို "supernormal stimulus" လို့ခေါ်ပြီးအတုအရာ ၀ တ္ထုတစ်ခုကတိရစ္ဆာန်၏ပင်ကိုအသိစိတ်တုန့်ပြန်မှုအားအလိုလိုရှာဖွေလေ့လာရန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသည့်သဘာဝအရာဝတ္ထုထက်ပိုမိုပြင်းထန်လာသောအခါဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ သဘာဝသည် Tinbergen ကဲ့သို့သောဥများကိုဘယ်သောအခါမျှမထုတ်လုပ်နိုင်သဖြင့်၊ ငှက်ငှက်များသည်၎င်းတို့၏ပင်ကိုအသိစိတ်တွင်ဥများမှဆွဲထုတ်ခြင်းမှကြက်ဥအတုများကိုဆင့်ကဲဆင့်ကဲကာကွယ်ရန်လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်ပါ။
Tinbergen အကြံကိုကြံ အခြားစမ်းသပ်ချက် : ကအခြားမျိုးစိတ်ထိခိုက် supernormal လှုံ့ဆော်မှုကိုပြသ
Herring gull chicks များသည်အမေ၏ရှည်လျားသောအဝါရောင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုခြားနားသောအနီရောင်အစက်နှင့်ပြတ်ခြင်းအားဖြင့်စားရန်တောင်းပန်ခြင်း အနီရောင်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုသုံးခုပါသည့်ငွေစက္ကူအတုဖြင့်တင်ပြသည့်အခါယင်းသားများကယင်းတို့ကို ပို၍ ဒေါသထွက်စေခဲ့သည်။
တောက်ပအနီရောင် ventral ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့သစ်သားငါးနှင့်အတူတင်ပြလျှင်အထီး stickleback ငါးကိုမှန်ကန်ပြိုင်ဘက်ကိုလျစ်လျူရှုပါလိမ့်မယ်။
မီးခိုးရောင်လိပ်ပြာများသည်လိမ္မော်ရောင်လိပ်ပြာများနှင့်မိတ်လိုက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ပုံစံသည်အရေးမကြီးပါ Greylings ကဒီနေရာကိုအလုံအလောက်ရောက်နေရင်တော့စတုဂံတစ်ခုနဲ့လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Tinbergen ၏စမ်းသပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မတော်တဆဖန်တီးထားသောသာမန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ထွက်လာသည်နှင့်ဘီယာပုလင်းများသည်သြစတြေးလျရတနာပိုးတောင်မာများ (နှင့်ထို့နောက်အချို့သောသူများ) ကိုရှာဖွေရန်အတိအကျဖြစ်သည်။ ဒီပိုးတောင်မာတွေဟာအမှိုက်ပုံကို single sing bar လိုဆက်ဆံပြီးသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအရမ်းစွဲမက်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ကမိတ်ဖို့ကြိုးစားနေသေဆုံး.
တချို့ကတိရိစ္ဆာန်များပင်သူတို့၏အားသာချက်မှ supernormal အစပျိုးသုံးစွဲဖို့နည်းလမ်းတွေပြောင်းလဲပါပြီ။ လေ့လာရေးအကြံပြုခဲ့ကြ ဒီ cuckoo ကြက်, brood ကပ်ပါး, ၎င်း၏အိမ်ရှင်မိဘတစ် ဦး ထူးဆန်းသောလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အဆိုပါ cuckoo ကြက်၏ gape အရောင်အရေပြား patch ကိုအိမ်ရှင်မိဘ၏အမြင်အာရုံကိုနှိုးဆွပေးသည်၊ ၎င်းသည်ကပ်ပါးကောင်၏ကြင်နာမှုကိုသဘာဝသားစဉ်မြေးဆက်အပေါ်ပိုမိုနှစ်သက်စေသည်။
အဆိုပါအဘယ်ကြောင့် hentai ၏
Betty Boop ၏ခေါင်းကို Marilyn Monroe ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်။
Hentai နှင့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာကာတွန်းများသည်လူတို့၏လိင်စိတ်နိုးထမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်သည်။ အထူးသယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇ။ *
In Desire ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာရှင် ဒါဝိဒ်သည် Buss အီဗိုလူးရှင်းအိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖွေအထူးသဗီဇအတိုင်းနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှိပ်စောဒကတက်သည်။ ထိုသို့သောဗီဇအတိုင်း (ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကြုံတွေ့နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်အတွက်အတုနဲ့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှေးကွေးခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်).
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အောင်မြင်မှုသည်လူတစ် ဦး ၏မျိုးရိုးဗီဇကိုလွှဲပြောင်းခြင်းအပေါ်ရည်ညွှန်းသောကြောင့်ဘိုးဘေးအမျိုးသားများသည်ကလေးမွေးနိုင်သည့်အမျိုးသမီးများကိုတန်ဖိုးထားလာကြပြီးဘိုးဘေးအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအားကလေးများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ရှေးကျသောဆာဗားနားတွင်ကလေးမွေးဖွားမှုဆေးခန်းများမရှိသောကြောင့်အမျိုးသားများသည်သင့်တော်သောအိမ်ထောင်ဖက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခြားနည်းများကိုမှီခိုအားထားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်သူတို့၏မျက်လုံးများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
"အလှအပကိုကြည့်ရှုသူ၏မျက်လုံးများတွင်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်မျက်စိနှင့်နောက်ကွယ်ရှိမျက်လုံးများနှင့်စိတ်ကိုနှစ်သန်းပေါင်းများစွာသောဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကပုံသွင်းပေးခဲ့သည်" ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏မျိုးပွားမှုတန်ဖိုးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည့်အစွမ်းထက်ဆုံးသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဘိုးဘွားအမျိုးသားများကဤအချက်များပြသထားသောအမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
မျိုးဆက်ပွားတန်ဖိုးကိုရည်ညွှန်းသည့်အမြင်အာရုံတွင်လူငယ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းများပါဝင်သည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ယောက်ျားများသည်အိမ်ထောင်ဖက်များအားဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်ကြိုးစားသည်။ ဆွဲဆောင်မှုသည်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော်လည်း၎င်း၏အသုံးအများဆုံးအင်္ဂါရပ်များမှာ“ နှုတ်ခမ်းအပြည့်၊ ကြည်လင်သောအသားအရေ၊ ချောမွေ့သောအသားအရေ၊ ကြည်လင်သောဆံပင်နှင့်ကြွက်သားကောင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဖော်ပြချက်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းအင်အဆင့်ကို။ "
Hentai, ဤအမြင်အာရုံတွေကိုယူပြီး 11 သူတို့ကိုတက် dials ။ အဲဒီရုပ်ရှင်ကားထဲတွင်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ယောက်ျားသဘာဝရေရှည်တည်တံ့သောအရာကိုကျော်လွန်အဆင့်ဆင့်မှအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ရှာပြောင်းလဲပါပြီသဘာဝတွေကို morph ။ အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ကလိင်ကွဲအထီးစိတ်ထဲအဘို့အပြောက်-dotted ကြက်ဥဖြစ်ကြသည်။
SFW နယ်မြေ၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုအတိအကျထိန်းသိမ်းရန် Jazz-Age လိင်သင်္ကေတ Betty Boop ကိုစဉ်းစားကြပါစို့။ Boop သည် Buss မှတ်စုများမှလူများအားသဲလွန်စအကွက်များအားလုံးကိုစစ်ဆေးသည် ကျန်းမာရေးနှင့်မျိုးပွားမှုတနျဖိုး။ သူမ၌ချောမွေ့သောအသားအရေ၊ နှုတ်ခမ်းအပြည့်၊ ကြွက်သားကောင်းခြင်းနှင့်ကြည်လင်သောမျက်လုံးများရှိသည်။ သူမသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းပြီးများပြားလှသောနုပျိုသောစွမ်းအင်ကိုပြသသည်။
တကယ်တော့သူမ၏နုပျိုဖို့ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ features တွေနှင့်အတူရွံရှာဘွယ်သောရောနှောအစွန်းရောက်ကိုယ်စားပြုတယ် စိတ်ပျက်ဖွယ်, neotenic အဆင့်ဆင့်။ သူမ၏ဦးခေါင်းကိုသူမ၏ခြေထောက်ရှည်လျားလွန်း, သူမ၏ကိုယ်ထည်ပေးထားသောသူမ၏လက်မောင်းဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်, သူ့, လာနိုငျကြီးမားသည် hip-To-ခါးအချိုး လမ်းလျှောက်ရာမှသူမ၏တားဆီးလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကအစစ်အမှန်ဘဝဘက်တီ Boop အပျိုဖော်ဝင်မှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုအံ့ဩပါလိမ့်မယ်။ ကာတွန်းနှင့်အမျှသူမနီးပါး 100 နှစ်ပေါင်းတစ်လိင်သင်္ကေတအဖြစ်ပေါ်နေထိုင်ခဲ့သိရသည်။
သင်ဖြစ်ရပ်ဆန်းသာရုပ်ပြကိန်းဂဏန်းများကန့်သတ်သည်ထင်နေလျှင်, တဖန်ပုံပါဘဲ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအပင်ကြောင်းပြသ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တစ် supernormal တုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်.
မှတစ်ခုဖြစ်သော Riace ကြေးဝါ။ အဆိုပါပန်းပုဆရာတစ်ဦးလက်တွေ့ဂရိလူကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့တူသောဒါဟာကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကြေးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာဗေဒပန်းအတွက် supernormal ဖြစ်ကြသည်။ Image ကိုရင်းမြစ်: Wikimedia Commons
အနုပညာခန္ဓာကိုယ်များသည်လိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဒီဇိုင်းမထားသည့်တိုင်လူတို့သည် ပို၍ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ရန်ပုံကြီးချဲ့ထားသောပုံစံကိုဆက်လက်တွေ့ရှိရဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူ၏ဘီဘီစီအစီအစဉ်တွင်ဂန္ထဝင်ဆရာနှင့်အနုပညာသမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာနီဂယ်စပီ၏စာတမ်းဖြစ်သည် ဘယ်လိုအနုပညာစေကြှနျုပျတို့ကိုလူ့.
Spivey အနုပညာကမ္ဘာကြီးကိုကျနော်တို့ကသူတို့ကိုပိုနှစ်သက်သောရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ supernormal ကိုယ်စားပြုအတူခြင်းသည်အလွန်များပြားစောဒကတက်သည်။ ဤသည် preference ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာသမိုင်းတွင်တစ်လျှောက်လုံးပုံပေါ်ပါတယ်။ အီဂျစ်အရုပ်စာ၏မှတ်သားသိနိုင်, ဂရိပန်းပု၏မြင့်သောစုံလငျနှင့်သမိုင်းမကလူကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းလွန်များစွာ Venuses စဉ်းစားကြည့်ပါ (အများဆုံးနာမည်ကြီးသည့် Willendorf ၏အ venus).
ပြပွဲအတွက်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ neuroscientist VS Ramachandran က Venus of Willendorf လိုသမိုင်းမအနုပညာကို Tinbergen ရဲ့ herring gull စမ်းသပ်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ Ramachandran အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်များသည်၎င်းတို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ရေခဲခေတ်အခြေအနေကြောင့်မျိုးပွားမှုနှင့်ရဲရင့်ခြင်းများကိုအိမ်ထောင်ဖက်များတွင်အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်။ ထို့ကြောင့်သမိုင်းမတိုင်မီကလူများသည်သူတို့၏ Venuses များကိုအလို လိုက်၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ Ramachandran ၏အဆိုအရ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏“ ထိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဗေဒဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု” ကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။
အမျိုးသားများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီခန္ဓာဗေဒပန်းထိုးခြင်းနှင့်မကင်းပါ Riace ကြေးဝါ။ ပထမဦးဆုံးမျက်နှာမှာဤဂရိကြေးမယုံနိုင်လောက်အောင် lifelike ပေါ်လာ; သို့သော်စစ်ဆေးခြင်းတို့အပေါ်မှာကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ခိုးအာနုဘော်ကိုရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။ ဘက်တီ Boop လိုပဲ, သူတို့ကခန္ဓာဗေဒမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ရဲ့ခါးနှင့်ကျောကြွက်သား, Spivey မှတ်စုများ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတတ်နိုင်သမျှထက်ပိုလုပ်ရန်ဖြစ်ကြသည်။ အထက်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူ symmetry ဖန်တီးရန်, ခြေထောက်အပိုရှည်ကြ၏။ ထိုသူတို့ကသူတို့၏ backline တိုးတက်စေရန်တစ်ဦး tailbone ကင်းမဲ့နေသည်။
ဒေါက်တာနီဂယ်စပီဗီက“ တကယ်တော့၊ ငါတို့လူသားတွေဟာအမှန်တရားကိုတကယ်မနှစ်သက်ပါဘူး။ ငါတို့ဟာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချဲ့ကားပြောတာ၊ "ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုရှေးဟောင်းဘိုးဘေးတွေနဲ့မခြားမလပ်ချိတ်ဆက်ထားပုံရတဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအယူအဆတစ်ခုပါ။ "
တစ်ဦးက supernormal ကမ္ဘာကြီး
hentai နှင့်ညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများလိုပဲ, junk အစားအစာကယ်လိုရီကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုထွက်ရှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲဗီဇနိုင်ဖို့စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ supernormal လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Image ကိုရင်းမြစ်: Wikimedia Commons
hentai သည်သဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုပုံစံတစ်မျိုးကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်း၎င်းသည်တစ် ဦး တည်းရပ်တည်။ မရပါ။ ဒီနေ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြုံစဖူးထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်ပြည့်နှက်ရန်ထိုအားသာချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ကြော်ငြာများ၊ ဝါဒဖြန့်ခြင်း၊ အင်တာနက်၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊
သူမ၏အတွက် ဘာသာရပ်အပေါ်စာအုပ်များဟားဗတ်တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာရှင် Deirdre Barrett supernormal လှုံ့ဆော်မှုခေတ်သစ်အဝလွန်ခြင်းအကျပ်အတည်းထုတ်လုပ်အကူအညီပေးခဲ့ကြောင်းစောဒကတက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်များအတွက်ကယ်လိုရီကြွယ်ဝသောအစားအစာများရှားပါးသဖြင့်သူတို့၏ပင်ကိုအသိစိတ်ကသကြား၊ ပရိုတင်းနှင့်အဆီအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စင်တာနှင့်ခိုင်မာစွာဆက်နွယ်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သည်ဤအစားအစာများ၏ထူးခြားသောဗားရှင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ မြင့်မားသော fructose ပြောင်းဖူးရည်သည်မည်သည့်သဘာဝအသီးထက်မဆိုအစာကိုချိုမြိန်စေသည်။ ဟမ်ဘာဂါနှင့်ကြော်တို့ကဆိုဒီယမ်နှင့်အခြားအဆီပိုများသောကြောင့်ထမင်းတစ်ခွက်တွင်မည်သူမဆိုလိုအပ်သည်ထက်ပိုသည်။ Barret အတွက် Tinbergen ၏ထူးဆန်းသောလှုံ့ဆော်မှုသည် Skittles နှင့် McDonald's တို့၏လူအချို့အပေါ်သဘာဝအားဖြင့်ခိုင်မာသောဆွဲဆောင်မှုကိုရှင်းပြသည်။
သို့သော် Barrett ၏စာတမ်းသည်သတင်းဆိုးများမဟုတ်ပါ -“ ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများမည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်သစ်အကျပ်အတည်းများအတွက်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူသားများသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များထက်ထူးကဲသောအားသာချက်တစ်ခု - ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းလွဲစေသည့်အခါပိုမိုရိုးရှင်းသောပင်ကိုဗီဇများကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်capableရာမ ဦး နှောက်ဖြစ်သည်။ ”
hentai ၏ဆွဲဆောင်မှု၏အဓိကအချက်မှာ supernormal ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုဖြတ်သန်းသွားသူတိုင်းသည်ရိုင်းစိုင်းသောခွေးကောင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ လူများစွာအတွက်၊ လိင်ခြားသူတစ် ဦး သည်လိင်ခြားသူတစ် ဦး နှင့်တူရန်မင်အားဖြင့်ပုံဖော်ထားသောအရာအားဆွဲဆောင်နိုင်ပုံကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်လူများစွာသည်မက်ဒေါ်နယ်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများကိုရှာမတွေ့ကြပါ။
သို့သော် Pornhub ၏အချက်အလက်များအရအခြားသူများစွာအတွက်ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုအပိုင်းကို ဖြတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဗီဇအတိုင်းပြုလုပ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအမျိုးသားများကမကြာခဏအစီရင်ခံလေ့ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွေးနွေးမှုကိုပိုမိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အမျိုးသမီးများ အရမ်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ supernormal လှုံ့ဆော်မှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လူမှုရေး More ရှိနေဆဲဟုကြောင့် data ကိုအတွက် underrepresented နိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျး ဒေတာကိုလည်းပြသ ယောက်ျားကပိုအမျိုးသမီးတွေထက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်သော။
လူမှုရေးနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများကို“ ညစ်ညမ်းမှုကွာဟမှု” ဟုခေါ်ဝေါ်ရန်ပေါင်းသင်းရန်လိုအပ်သည့်သုတေသနများစွာရှိသေးသည်။ သို့သော်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ သာမန်ယူဆချက်များမှာလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများနှင့်၎င်းတို့၏သိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရုပ်သံမီဒီယာအများစု၊
Web ကိုခန့် Related ဆောင်းပါးများ
Supernormal လှုံ့ဆော်မှု: သင့် Porn တွင်ဦးနှောက်, Junk စားနပ်ရိက္ခာများနှင့်အင်တာနက်ကို>
Supernormal Stimuli တွားသွားသတ္တဝါ ဦး နှောက်ရုပ်ပြ - Stuart McMillen ရုပ်ပြ›
🚨လေ့လာမှု🚨“ လူငယ်များတွင် ED သည်ကြောက်ခမန်းလိလိမြင့်မား။ ဤလေ့လာမှုရလဒ်များသည်သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုကိုညွှန်ပြသည်။ t.co/t8Kxr3FERd